Uthuthuva ngokotini waseXinjiang phakathi kweChina ne-USA - Bayede News
Uthuthuva ngokotini waseXinjiang phakathi kweChina ne-USA
IChina isisole i-USA ngokusebenzisa udaba lwaseXinjiang ukuzama ukudala uthuthuva nesimo sokungazinzi ngaphakathi kuleli lizwe ukuzama ukulinqinda amandla emveni kokuthi kuqubuke umsindo ngokotini ovela kuso lesi sifunda.
Okhulumela uMnyango Wezangaphandle eChina uHua Chunying utshele isithangami sezindaba ukuthi i-USA, abezindaba bakhona kanye namanye amazwe leli lizwe elidlelana nawo bamdibi nalabo abangazwani neChina ukufafaza amanga kanye nomkhankaso wokungcolisa igama leChina besebenzisa ulwazi olungekho.
“I-USA ikhande udaba lwaseXinjiang, hhayi ngoba ikhathalele abantu besizwe sama-Uyghur. Ngoba uma bekunjalo, kungani behlasele amazwe amaSulumane bebe benza ngathi balwisana nobushokobezi emva kokuhlaselwa ngoMandulo zili-11, nokuholele okufeni kwabantu kwaphinde kwahlukaniswa nemindeni yamaSulumane eyizigidi ngezigidi?” kuchaza uHua.
“Isizathu sabo sangempela esokucekela phansi uzinzo kanye nokuvikeleka eChina baphinde bavimbe iChina ukuze ingakhuli ibe namandla,” kuqhuba uHua.
Abantu baseChina badube izitolo eziphambili zempahla yokugqoka iH&M, iNike, i-Adidas kanye nezinye izinkampani emveni kokuthi zivale ukusetshenziswa kukakotini ovela esifundeni iXinjiang ngesonto eledlule, zikhala ngokuhlukunyezwa kwabantu bakhona.
Sekukaningi iChina ibhecwa ngezinsolo ezithinta ukuhlukunyezwa kwamalungelo esintu, ukugqilazwa kwezisebenzi kanye nokubhuqwa kwabantu bama-Uyghur nabalandela inkolo yamaSulumane esifundeni iXinjiang.
Phakathi kwezindawo lapho okuthiwa kwenzeka khona lokhu kuhlukunyezwa kwabantu imboni kakotini eXinjiang nokuyilapho kuvela khona izinga eliphezulu likakotini osetshenziswa izinkampani zemfashini ezinkulu emhlabeni.
Ngokwemibiko kaHulumeni, ama-87% kakotini okhiqizwa iChina uvela eXinjiang, bese kuthi leli lizwe likhiqize amaphesenti angamashumi amabili kakotini emhlabeni wonke.
IChina iyaziphika izinsolo zokuhlukunyezwa kwabantu bama-Uyghur ekukhiqizweni kukakotini, futhi ithe kule mboni umsebenzi omningi wenziwa ngemishini.
Okhulumela uHulumeni, uZhao Lijina uthe ngokwezibalo zemboni yezolimo eXinjiang, ama-70% kakotini ukhiqizwe ngokusebenzisa imishini ngowezi-2020.
Ube esechitha nezinsolo zokuthi uHulumeni ugqugquzele abantu ukuthi badube izitolo zemfashini zangaphandle, ethi isinyathelo salezo zinkampani ezithintekayo sokuvala ukusetshenziswa kukakotini waseXinjiang okuyikhona okucasule umphakathi.
Umsindo ngokotini ovela eXinjiang kanye nezinyathelo ezithathwe izinkampani zangaphandle ulandele isinyathelo se-USA, i-European Union, i-United Kingdom kanye neCanada sokufaka unswinyo abantu abathile baseChina ngesonto eledlule.
La mazwe athe abeka lolu nswinyo ngenxa yokukhathazeka ngendlela iChina ephethe ngayo udaba lwaseXinjiang, nokuyisenzo esenze ukuthi iBeijing nayo iphendule ngokufaka olwayo unswinyo.
IKhomishini yeNhlangano Yezizwe ebhekelela amalungelo esintu ithe ziningi izinkampani zaseChina kanye nezangaphandle ezikhiqiza izimpahla ezinamagama adumile okungenzeka ziyathinteka ekushushumbisweni kwabantu, ukuphoqa abantu ukuthi basebenze, kanye nokunye ukuhlukunyezwa kwamalungelo esintu.
“Ongoti abehlukene abaqokwe iHuman Rights Council bathe bathole imininingwane ehlanganisa izinkampani ezili-150 zaseChina kanye nezangaphandle nezinsolo zokuhlukunyezwa kwamalungelo esintu ezisebenzi zama-Uyghur,” kusho isitatimende esikhishwe i-United Nations Commission for Human Rights kuleli sonto.
Isitatimende sikhishwe iWorking Group on Business and Human Rights engaphansi kweKhomishini Yamalungelo Esintu nokuyisigungu esijutshwe ukuthi siphakamise ukukhathazeka ngokwenzeka kubantu bama-Uyghur eChina.
Lesi sigungu sithe sikhathazeke kakhulu ngalezi zinsolo, njengoba sithi uma kutholakala ukuthi ziyiqiniso, zizobe zisho ukuhlukunyezwa kwamalungelo esintu okubi kakhulu.
Nokho asizange sidalule ukuthi zivezwe ngubani lezi zinsolo esitatimendeni saso ngaphandle kokubalula imithombo engenamagama.
Ngabe selidume ledlula kuMugabe, noHulumeni wakhe?
Le mithombo, ngokusho kwesitatimende, ithe izisebenzi zama-Uyghur kubikwa ukuthi zisebenza ngaphansi kwezimo zobugqila nezifana nokuboshwa ngale kwesizathu, ukushushumbiswa kwabantu, kanye nokugcinwa kwabantu njengezigqila.
“Izisebenzi zama-Uyghur kubikwa ukuthi ziphoqwa ukuthi zisebenze ezikhundleni zabantu abanamakhono asezingeni eliphansi, ezimbonini ezifukuzisayo nezifana nezolimo, imboni yendwangu, imboni yezimoto kanye neyezobuchwepheshe,” kubeka uDante Pesce ongusihlalo weWorking Group.
UPesce uthe ngesikhathi uHulumeni waseChina uchaza izenzo zawo njengohlelo lokulwisana nobushokobezi, ububha noma njengohlelo lwentuthuko, kodwa banxusa ukuthi uyeke zonke izinhlelo ezingahambisani nomthetho olawula amazwe omhlaba.
Lesi sigungu siphinde sanxusa uHulumeni waseChina ukuthi usivumele sivakashele eXinjiang ukuyokwenza uphenyo ngokuqhubekayo.
Sibe sesiqhuba sithi sikulungele ukuqinisa uhlelo lokuxoxisana noHulumeni waseChina ngokunjalo bazokwamukela ukuphendula okusheshayo kukaHulumeni kulezi zinsolo.
IPhini likaSihlalo uSurya Deva lithe amabhizinisi amaningi athinteka ngqo noma athinteka ngoba izinkampani asebenzisana nazo kuyizo ezihlobene nalezi zinsolo zokuhlukunyezwa kwabantu baseXinjiang.
“Amabhizinisi awangazishayi indiva lezi zinsolo kodwa aqhube umsebenzi ngendlela ehambisana nokuhlonishwa kwamalungelo esintu ngokuhambisana nemigomo ye-UN, ukuze kuhlonzwe, kunqandwe, kuphinde kulungiswe lapho kubekhona nokuhlukumezeka kwamalungelo abantu, nokutholakala ukuthi kwenzeke ngesikhathi kwenziwa khona imikhiqizo noma imisebenzi eXinjiang kanye nakwezinye izifundazwe zaseChina,” kuchaza uDeva.
Ochwepheshe be-UN bathe sebewubhalele uHulumeni waseChina kanye, izinkampani zakuleli lizwe kanye nalezo zangaphandle okusolakala ukuthi ziyathinteka kulezi zinsolo ezibikwayo zokuhlukunyezwa kwamalungelo esintu eXinjiang.
Bathi baphinde babhalela noHulumeni bamazwe ayishumi nantathu lapho kuvela khona ezinye zezinkampani ezithintekayo, bebakhumbuza ngokuzibophezela kwabo emigomeni ye-UN elawula amabhizinisi kanye namalungelo esintu ukuqinisekisa ukuthi izinkampani zabo ziyawahlonipha amalungelo abantu.
nguZanele Buthelezi Apr 2, 2021